Nzira yekubata sei mugadziri weapp | IPhone nhau
Kwenguva yakareba isu tinowana chinonakidza chiitiko muApple chairo app chitoro kune ese maApple madivaysi uye macOS, inotibvumidza kupinda kutaurirana neyekuvandudza mushandisi kubvunza kana kugadzirisa dambudziko.
Mune ino kesi, iyo yekuonana ruzivo yevagadziri inowanikwa mune maapplication uye isu tinogona zviwane kubva kune edu iPhone, iPad, iPod touch, Mac, kana Apple TV. Iyi sarudzo inotibvumidza kutarisana nemusimudziri weapps chero bedzi iri mune yepamutemo Apple chitoro, nekuti mune iyo Mac tinowana ruzivo rwekutaurirana pane uyu anovandudza webhusaiti kunze kweApple chitoro.
Taura nekutaurirana kubva ku iPhone, iPad kana iPod touch
Zvinogona kudaro nekuti kusashanda kana zvakananga na kunyorera nzira kutadza (izvozvi zvava zvemufashoni) zveapp pachayo, izvo zvinotimanikidza kuti tibate mushambadzi, saka zvakakosha kuti uzive kuti kupi uye kupi kwekuwana ruzivo urwu. Iye zvino tichaona maitiro ekuiwana kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura iyo App Store uye kuve nechokwadi chekuti isu takapinda neApple ID yatakatenga iyi app inotipa matambudziko. Kana izvi zvichinge zvasimbiswa, chatinofanirwa kuita tinya paapp iyo inotipa dambudziko (kungave mukutenga kana kutsvaga chaiko zita reapp kuburikidza neinjini yekutsvaga) uye tinya paapp. Kana tangopinda mukati tinofanirwa kudzika kunzvimbo yeitarisiko uye ikoko tinowana sarudzo yeku «Nyora wongororo» uye «App rutsigiro».
Kwedu isu chii Isu tinofarira chikamu cheApp rutsigiro saka kana iwe ukabaya zvakananga, zvinotitora isu kune anovandudza webhusaiti kuitira kuti tikwanise kukutumira email uye kugadzirisa dambudziko. Kana iwe usingaone App Tsigiro, ita shuwa kuti wakasaina neiyo chaiyo Apple ID sezvo iwe ungasave wakasaina mukati. Zvino zviri kune yega yega uye isu tichafanirwa kumirira iye anovandudza kuti atipindure kune kusahadzika, dambudziko kana zano ratiri neapp yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutaurirana neanogadzira app